Warar Goos goos ah. Ruunkinet 28/11/2009
Wadaaddo lagu dilay Baladweyne
Laba wadaad ayaa lagu dilay masaajidka Nuur Xawaad ee degmada Baladweyne khadiibkii masaajidkana waa la dhawacamay ka dib markii iyagoo ka soobaxay masaajidka shalay koox dablay ah ay ku rasaaseeyeen gudaha magaalada Baladweyne.
Kooxo hubeysan oo weerarka geystay, ayaa baxsaday, waxana dad meesha uu falka ka dhacay ka agdhwaa ay sheegeen inay kooxahaasi ay si ula kac ah u rasaaseeyeen wadaaddada markii ay masaajidka ka soo baxayeen.
Maamulka Xisbul Islam ee Baladweyne, ayaanan wali ka hadal arrinkan.
Ururka Ahlusunnah, ayaa weerarkan ku eedeeyay kooxaha maleeshiyadooda gacanta ku heysa ee Xisbul Islaam.
Khadiibka masjidka oo layiraahdo Sheekh Daa'ud Cali Barkhadle, ayaa lagu dabiibayaa magaalada Baladweyne ee xarunta gobalka Hiiraan.
Sheekh Xasan Daahir oo Alshabaab ugu baaqay inay joojiyaan gaaleysiinta dadka Muslimka ah
Hogaamiyaha mucaaradka ah ee Xisbul Islaam Sheekh Xasan Daahir Aweys, ayaa ururka Alshabaab uga digay gaaleysiint dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ah, isagoo sheegay in arrinkaasi uu cawaqib xun keeni karaayo.
Sheekh Xasan, ayaa ka hadlaayay deegaanka Calamada ee duleedka Muqdisho,waxa uu sheegay in aan loo baahneyn in dadka lagu tilmaamo kuwa (riddo ah) diinta kabaxay, waxana Alshabaab uu u sheegay inaanay jirin cid dhinacooda dhiigooda baneysan karta ayna iyaguna dhiiga muslimiinta baneysan.
Sheekha, ayaa hadalkasi sheegay xilli uu ka hadlaayay khilaafaadka u dhaxeeya ururkiisa iyo Alshabab ee dhawanna ku dagaallamay qeybo kamid ah gobalka Jubada Hoose.
"Cidii lug naga goysa ama gacan naga goysa waxaan leenahay dhiigiina Xalaal nooma ahan keenana xalaal idiinma ahan ee Illaah nooga baqa"ayuu hadalkiisa sii raaciyay Sheekh Xasan Daahir.
Lama garanayo siday Shabaabku uga jawaabi doonaan hadalka ka soo yeeray hogaamiyaha Xisbul Islaam.
Labada urur diimeed oo markii hore ka sinnaa gaaleysiinta dowladda Soomaaliyeed iyo la dagaallankeeda oo ay culimo Soomaaliyeed hore u sheegeen inay xaaraan tahay in lala dagaallo dowladda, ayaa indhawalaba uu ahaa xiriirkooda mid aan wanaagsaneyn.
M/Yurub oo ka arrinsaday la dagallanka burcad badeedda
Baarlamaanka midowga Yurub,ayaa khamiistii isku raacay in si wada jir ah loola dagaallo burcad badeedka Soomaalida islamarkaasina la baabi'iyo burcad badeednimada oo sanadkan aad uga korodhay tiradii sanadkii hore.
Kullanka oo ka dhacay xarunta dalka Biljamka ee Barasles, ayaa waxa sidoo kale la iskula soo qaaday kororka burcad badeednimada iyo sida ugu muhiimsan ee looga hor tagi karo.
Waxa kulanka laga soosaaray in sidoo kale xooga la saaro xal u helidda gudaha dalka Soomaaliya.
Midowga Yurub, waddamada kale oo Asia ah iyo Mareykanka ayaa wada isku day ay burcad badeednimada ku joojinayaan, waxase taliska ciidamada badda ee Soomaaliya ay sheegeen dhawaan in burcad badeednimada la joojin karin inta laga joojinaayo kalluumeysiga sharci darrada ah ee ay wadaan waddamada dunida qaarkood.